Yakareba-hupenyu mc nylon inotsvedza ndeye mhando yepamusoro uye yakasimba |
Saizi: customized maererano kudiwa
sevhisi: Gadzirisa maererano nemufananidzo
Mavambo: huaian jiangsu zvinhu:zvinhu zvenaironi，PA6 / MC
chigadzirwa zita:Mc nylon inotsvedza maitiro:Jekiseni Kuumbwa / centrifugal Kudzingwa / CNC machine
ruvara:Tsika mavara sampu:Mutengi mutengo
Brand: Haida jekiseni: centrifugal Kudzingwa
Kukura: yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa
1. Yakakwira simba rekumanikidza uye hwakawedzerwa hupenyu hwebasa.
2. Inogona kuchengetedza pamusoro pesimbi yesimbi kubva pakakwenya.
Kupa Mazano: Ona vhoriyamu yekutenga
Kavha uye kutumira
Rongedza zvinhu: Kazhinji tinoshandisa bubble firimu pamwe nemakadhibhokisi mabhokisi, uye kana zvichidikanwa, matanda mapallet kana emapuranga mabhokisi anozoshandiswa. Zvinhu zvidiki zvakazara mumabhegi ekuzvisimbisa-wega + makatoni. Zvinhu zvakakura zvakarongedzwa mumasaga emapuranga + mabhokisi emapuranga.
Mc Nylon Slider Sumo
Mc Nylon inotsvedzas akaiswa polymerized mumakanda enylon akasiya, ayo anogadzirwa kuita akapedzwa zvigadzirwa ne lathes, yekugaya michina, uye osmium mibhedha. Icho chigadzirwa chepamusoro-soro icho nyika yakasimudzira zvine simba nekuishandisa mumakore apfuura. Iyo yepamusoro-mamorekuru polymer. Zvakanakisa zvemishini zvivakwa zveMcNylon zvine simba remuchina simba, kuomarara kwakanaka, kusagadzikana kwekumanikidza uye kuneta kusagadzikana, kunyanya nekukamba kwakanaka kwekukwira, saka vanogona kumira mutoro unorema wemabheyari kwenguva yakareba; McNylon zvigadzirwa zvine kugadzikana kwakanaka zvinogona kukotama Iko hakuna zvachose deformation yepasi, iyo inogona kuchengetedza kuomarara kurwisa kuputsika kunokonzerwa nekudzokororwa kwakawanda mhedzisiro. Ichi chinhu chakanakira zvigadzirwa izvo zvinomira nemhando yepamusoro yemitoro
Pashure: Tinogona kupa zvakagadziriswa masevhisi emhando yepamusoro crane nylon pulleys mumhando dzakasiyana uye magadzirirwo sezvaanodiwa
Zvadaro: Nylon pushoni ine yakanakisa kugadzikana uye yakanakisa mehendi zvivakwa
Maitiro ekuona mhando yechigadzirwa？
Tine makumi emakumi emakore ekugadzira ruzivo, hunyanzvi hwekugadzira michina, uye ekuyedza zviridzwa.
Zvigadzirwa zvako zvinogona kugadzirwa customized
Tsigira akasiyana maratidziro uye akasiyana mavara ehunhu, anogona kutipa isu nemadhirowa, tinogona kuburitsa zvakananga
Kuchema misodzi sei
Iko kusimba kwesimba rekumanikidza kwakawedzera uye kwakapfuura kukosha kwemupata ungangoita mamirioni maviri. Panguva ino, zvirimo zvinowedzera uye simba rekumanikidza rinoderera. Izvi zvinodaro nekuti mamorekuru echimiro emaketani anombovhara mwenje wawo wekristallisation mhedzisiro, saka kune yakakura nzvimbo yeamorphous mune yehupenyu macromolecule, iyo inogona kugaya uye kupinza yakakura kukanganisa kinetic simba.
Crane nylon inotsvedza
Mc nylon inotsvedza
Nyanzvi yekugadzira jekiseni remotokari ...
yepamusoro yepamusoro Nylon inotsvedza yeKuvaka Mach ...
Nyanzvi mukugadzirwa kwe crane nylon s ...
Zvinhu zvenaironi pamutsago kwazvo kugadzikana uye exc ...